Jumlada Super Clear Zirconia Disc 98mm Dabaqyo badan Zirconia Block oo loogu talagalay Maaddada Taajka Ilkaha oo la jaan qaadi kara Soo-saaraha CAM iyo Soo-saaraha CAM Furan | Yurucheng
Super Clear Zirconia Disc 98mm Dabaqyo badan oo Zirconia Block ah oo loogu talagalay Maaddada Crown Cunt oo la jaan qaadi kara CAD CAD
Nidaamka iswaafaqsan iyo cabbirrada la heli karo SHT block zirconia multiplayer:
Yucera waxay leeyihiin maareyn xakameyn geedi socod adag si loo hubiyo badeecada qulqulka badan. Waxaan kuu haynaa jawaab degdeg ah jawaab celin. Haddii loo baahdo, waxaan aadeynaa meeshaada. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican oo aan ku siinno badeecad tayo sare leh iyo adeegga maanka. Khadka tooska ah: +8618018734694 (whatsapp)
1.T/T, West Union, Paypal, L/C iwm
2Siyaasadaha Kuwa Kale Siyaasad Tusaale: Waxaan ku bixin karnaa muunad bilaash la'aan.
3Siyaasadda Sicir -dhimista: Waxaan bixinnaa sicir -dhimis dalabka weyn.
4.Siyaasadda OEM: Waxaan aqbali karnaa dalabka OEM.
Q5.Sidee baan u dalban karaa?
J: Waxaan sameyn doonaa xigasho kadib markaad noo soo dirto qorshahaaga iibsiga (oo ay ku jiraan magaca badeecada, moodeelka iyo tirada). Haddii aad ku raacdo oraahda, fadlan noo soo dir magaca shirkaddaada, cinwaankaaga iyo taleefankaaga si aad alaab u keento. Waxaan samayn doonaa qaansheegta proforma oo waxaan kugu wargalin doonaa habka lacag bixinta. Faahfaahinta gudbinta alaabta ayaa sidoo kale si habboon loo wargelin doonaa.
Q6. Waa maxay shuruudaha qiimahaaga?
J: Qiimahayagu waa qiimaha EXW CIF & FOB, ku soo dhawow inaad si toos ah noola soo xiriirto emayl, whatsapp.
Q7. Waa maxay waqtiga dhalmada?
J: 5 -7 maalmood oo shaqo oo cad.
Haddii ay dhibaato kaa haysato adeegsiga, waxaad sharxi kartaa faahfaahinta dhibaatada, waxaan ka codsan doonnaa farsamayaqaan inuu ku siiyo xalkaaga. Qalabka dayactirka ee bilaashka ah ayaa la bixin karaa haddii loo baahdo.
Hore: YUCERA soo saaraha walxaha ilkaha ee kaabayaasha dhaqaalaha ilkaha zirconia
Xiga: Yucera ilkaha ST zirconia block for cad / cam system / zirconium ilkaha shaybaarka CAD